प्रदेशको राजधानी दाङ्ग हुने खुलासा गर्दै सांसद मेटमणीले भने, “सबै सरकारी जग्गा अब थारुले पाउँनेछन् ।” « Light Nepal
प्रदेशको राजधानी दाङ्ग हुने खुलासा गर्दै सांसद मेटमणीले भने, “सबै सरकारी जग्गा अब थारुले पाउँनेछन् ।”
Published On :7March, 2018 4:01 pm
काठमाण्डौ २३ फाल्गुन । संघिय संसदमा दाङ्गबाट प्रतिनीधित्व गर्ने सांसद मेटमणी चौधरीले दाङ्गमा रहेको गुठी, विश्वविद्यालय र ऐलानी जग्गाहरु अब सुकुम्बासी थारुको नाममा नामसारी गरिने बताए । प्रतिनीधि सभाकालागि प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित सांसद मेटमणीले अब सबै सरकारी नाममा भोग चलनमा रहेका चल अचल सम्पत्तिहरु दाङ्गका सुकुम्बासी थारुहरुको नाममा नामसारी गरिने बताएका हुन् ।
वि.सं. २०४५ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएका सांसद मेटमणीले आफु जनप्रतिनीति भए लगत्तै निर्वाचनका बेला जनतासामू गरेका सबै खाले प्रतिबद्धता अनुसार सबै भन्दा पहिले सरकारी सबै सम्पत्तिहरु जनताको नाममा पास गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए ।
त्यसकालागि कानुनतह नीति नियमहरुको आवश्यकता हुने भएकाले नयाँ नीतिहरुको खाता कोर्दै गरेको पनि बताए । “दाङ्गका सुकुम्बासी थारुहरु अहिले पनि अरुको घरमा कमैया गरेरै जीविको पार्जन गरिरहेका छन् । हामी कम्युनिष्टहरु सर्वहारको पक्षमा ओकालत गर्ने नेता भएकाले मेरो पहिलो प्राहर अब सरकारी चलअचल सबै खाले सम्पत्तिहरु सर्वहार जनताको नाममा गर्ने कार्यबाट शुरु हुनेछ ।” भन्छन्,“यसकालागि आवश्यक नियमहरुको खाका तयार गर्दैछु ।”
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनीधि सभाको निर्वाचन सकिएर नतिजा सार्वजनीक भए लगत्तै यतिबेला संसदमा बैठक चलिरहेको छ । सांसद भएको नाताले बैठकमा सहभागी हुन दाङ्गबाट काठमाण्डौ आएका सांसद मेटमणीलाई प्रदेशको राजधानी दाङ्ग हुने चर्चा परिचर्चा चलिरहंदा बुटवल घोषणा भयो । दाङ्गकालागि तपाँईहरुको भुमिका निष्कृय भयो नी भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने,“बुटवल अस्थाई राजधानी हो । भित्री र्गहकार्य भैरहेको छ । छिट्टै नै दाङ्ग घोषणा हुनेछ ।”
अखिल पाँचौबाट राजनीतिको यात्रा शुरु गरेका मेटमणीले लामो समय विद्यार्थी राजनीति पोक्त सांसद मेटमणी वि.संं. २०७० सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको नौं औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रिय सदस्य भएका थिए । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय सांसद मेटमणीको लगनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले उनलाई भर्खरै सम्पन्न प्रतिनीधि सभा निर्वाचनकालागि उम्मेद्धाको रुपमा टिकट दियो ।
निर्वाचनकालागि टिकट पाएका सांसद मेटमणी सानैबाट थारु समुदायकालागि जनप्रिय नेता भएको हुनाले उनले अत्यधिक मतका साथमा नेपाली कांग्रेसका आफ्ना प्रतिद्धन्द्धि सुशिला चौधरीलाई हराएका थिए । भिडियो सहित